Last updated: Jan. 05 2018 | 3 Maminitsi verenga
Vanhu vane nemhando dzose turika kupota kana totaura nezvokudanana, and maybe one of the most common is feeling stressed or negative about paying for the date. Men respond differently to this stress. Vamwe varume nguva dzose kubhadhara, asi muchivande kunzwa kunaka mukati ndikarega Pakunyora cheki. Vamwe varume vanoramba kubhadhara hafu mumwe uye vamwe vanhu pachena akatsamwa nezvazvo. Vamwe varume inongova kutya nokunenge yekare zvechinyakare zvechokwadi kana vava kupa mari bhiri.
Ndinoziva varume achangozvinetesa sandara panze vanoramba kubhadhara zvakazara musi wokutanga, pachinzvimbo achingoti bhiri anofanira akatsemura chaizvo hafu. Sei? Nokuti vaifanira zvakaitika kubhadhara kuti musi chinodhura nomukadzi dzakawanda chete kuti haana kunzwa kubva kwaari zvakare. Pamwe iwe wakava izvi zvichiitika kwauri. Zvichida waiva mukadzi iwe aifarira uye vakafunga iwe vakanga vibing pamwe, saka iwe aida kubhadhara, chete kuti naye kunyangarika uye haana kudzokera kwenyu Kushanya. Kana zvichida hamuna mari dzakawanda mediocre kana darned rworudyi zvinotyisa yemichindwe uye iwe yokuchiramba. Zvose zvaparadzwa zvakaoma yakatsakatika mari. Uye ini kuwana kuti ini zvechokwadi kuita. Ndiani asingadi kunzwa kwazvo!
Munguva dzino wakanyatsojeka nei munhu kutarisirwa retsoka yose Mari bhiri chete nokungoti munhu? Women vanoda kuenzana, zvakanaka pano zviri.
Regai ndikuudzei zvishoma chakavanzika. Kana iri iwe, uye iwe uri pakuti kwake kubhadhara hafu pazuva rokutanga pamusi, izvi zvichaita unozvidzinga kure zvakanaka unhu mukadzi upi zvechikadzi. Munoona Ini kudzidzisa vakadzi vangu vatengi kuti avo zvechikadzi simba akapoteredza varume nomumwe, zvinoshanda nani kuti nzira. Izvi zvinoreva kugamuchira akanyatsodengezerwa uye waibvumira murume kuti dzorudo naye. Haugoni zvose kuva kwako wokuratidza simba, zvikasadaro dzorudo havagoni kubudirira. Zvaizova kufanana nomumwe zvaunogona naye, uyo pachena aibhadharwa hafu bhiri. Saka nepo Ndinonzwisisa kushungurudzwa kwaunoitwa, Ini zvikuru dzinorumbidza kuramba kuita gentlemanly chinhu uye kupa kubhadhara. Mukadzi achagara unonyatsokoshesa iwe nokuti.
Uye regai chete kuzviita navakadzi chaunoda. Mukumbire kuti kubhadhara musi YOSE. Kunze chokwadi kuti izvi chete chinopa wakanaka chimiro uye tsika dzakanaka, zvinhu zvose zvakasikwa zviri vakarinda uye muri kuita zvakanaka mumabasa. harizovi kunoonekwa.
Ndaimbova musi aienda chaizvoizvo zvakanaka. Zvisinei pakupera ari mukomana chaizvoizvo akabudisa imwe karukureta kuti vakarambana bhiri chaizvo maererano vakanga chii kudya nokunwa (zvakanaka Ndinofunga yakanga karukureta ari pafoni yake asi vachiri). Panongotanga ichi chakaitika Ndakanzwa zvose kukwezvana ndakanga zvamboshandiswa kunzwa zvaimutambisira chaipo kubva kwandiri. WOW! Ndaisazombofa kufungidzira kuva nemunhu akadai – Kana akaita izvi zvino kufungidzira aizova akafanana kurarama! Ungafungidzira kunotenga muna Ikea nokuda fenicha? Zvakadini nezuva rekuberekwa wangu, ndingadai kubhadhara hafu iyewo? Kwete chaizvo da.
Tisave jaded pamusoro kubhadhara nokuda kungova unofara nezvazvo. In ine uye koromoka zvokufambidzana, vamwe vakadzi iwe atore vachanyangarika akasazodzoka dzenyu Kushanya. Zviri ndima kuti kosi. Ini Bet waita zvakafanana munhu imwe nzvimbo achitevedza mutsetse kana muri noutsinye akatendeseka pachako. zvisinei, kana mudzimai wako anoita vauya, uye imi kuti anzwe chaiwo nokusika dzorudo nokuti aida kubhadhara, kwete chete ichi kuchaita mudzakisirwa kumusoro kukwezvana, asi iye richacherechedza iwe nokuda simba, wokuratidza murume muri.
Saka ndinoti musafunganya pamusoro akwegura zvechinyakare - ngatitorei kutsigira chivalry, dzorudo uye chido. Madii kungogara shure uye afarire mufaro unogona kuuya nomukadzi nokuita izvi mutsa chinhu nokuda kwake, kana uchida kumuona zvakare kana kwete. Unogona zvino patinodziya mushana, patinoravira zivo kuti muri zvakakodzera, zvizere nokufambira akazvimirira murume, ndiani anogona kusarudza kurapa mukadzi, nokuti anogona. kudada.